Maitiro ekumisa kunyorera kwako kubva kune yako iPhone, iPad kana iTunes | IPhone nhau
Zvakajairika nhasi kuti mumwe nemumwe wedu ane imwechete inoshanda subscription kune chishandiso kana magazini yedhijitari. Kuwedzera uye kwakawanda kunyorera kuri kusarudza Freemium sevhisi yavo, kuti uwane rubatsiro kubva kumabasa avo. Izvo zvinokwanisika kuti iwe hausisiri kushandisa chishandiso icho iwe chaunobhadhara pamwedzi wega wega uye unoda kukanzura icho, ipapo isu tinokuratidza maitiro ekuzviita nenzira mbiri dzakasiyana.
Apo patinotaura nezvazvo maapuro kana mitambo Freemium, Nintendo achaita sei, Isu tinoreva kune avo vatinogona kurodha pasi zvakakwana vakasununguka kubva kuApp Store uye shandisa zvakajairika asi zvakare ipa yakateedzana yemabasa kana kugadzirisa izvo zvinoda a pamwedzi kana pagore kubhadhara.
Kana tikataura nezve kunyoreswa kwemwedzi nemwedzi zvinokwanisika, uye zvirokwazvo mazhinji acho akafanana, kuti une mutengo wakaderera uye hatizive kuti vari kutibhadharisa. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti nguva nenguva tiongorore kunyorera kwese kwatinako kuitira kuti tirege kubhadhariswa chinhu chatisingachashandisi kana chatisingade.
Tine sarudzo dzinoverengeka dzekuona uye kudzima kunyorera kwedu, imwe ichibva kune yedu iOS chishandiso, iPhone kana iPad, kana yechipiri sarudzo ndeyekuzviita kubva iTunes.
1 Kanzura kunyoreswa kubva ku iPhone kana iPad
2 Kanzura kunyoreswa kubva kuTunes
Kanzura kunyoreswa kubva ku iPhone kana iPad
Zviripachena, chinhu chekutanga chichava kugadzirisa iyo «Zvirongwa»Kubva pane yedu kifaa.
Tevere, isu tinofanirwa kupinda muchikamu «iTunes neApp Store»Uye kamwe imomo, takapinda yedu Apple ID. Tichatibvunza kupinda kusimbisa kuwana.
Tangopinda mukati, tinotsvaga sarudzo «Subscriptions»Uye takapinda mairi. Chinyorwa chinofanira kuoneka nechimwe nechimwe cheseu anyoresheni atinawo.
Iko kutendeuka kwe cancel iyo yatisingade. Dzvanya pairi uye isu tinopinda kuti tione iyo zvinyorwa zvekunyorera, rudzi rwekunyorera, mutengo uye nesarudzo ye Zvinyore.
Kana isu tikabaya pane iri bhatani, meseji yekuzivisa ichaonekwa kuratidza kuti tinoda kukanzura kunyorera. Kungozvisimbisa, tichava tapedza maitiro. Ziso, iro kunyorera hakupere kana tikakanzura, ndiko kuti, kana zvakarongerwa kuvandudzwa musi wa30 uye nhasi uno uri wechigumi nemashanu, tichanakidzwa nemasevhisi ayo kusvikira zuva raanofanira kuvandudzwa.
Kanzura kunyoreswa kubva kuTunes
Kamwe mukati mekushandisa iTunes, kungave kubva paPC kana kubva kuMac, isu tinofanirwa kuenda, mune menyu, kune sarudzo «Akaunti -> Wona account yangu".
Izvo zvichatikumbira isu kuti tinyore iyo pasiwedhi zvedu Apple ID uyezve tichaona rese data reizvi.
Pakati pezvikamu zvakasiyana zvinoonekwa, kanenge kumagumo, muchikamu chiri pa Zvirongwa, sarudzo «Subscriptions»Uye padivi payo bhatani re«Manage".
Kana tangopinda mukati, tichaona iro rese runyorwa rwe zvinoshanda uye zvakapera kunyorera kuti isu takabatana neApple ID yedu. Kana tikadzvanya pa «Hora»Tinogona kuona ruzivo rwayo uye kukanzura yatiri kuda.
Tinokurudzira kuti nguva nenguva uite a kuongorora kwekunyoresa kwako, sezvo sezvandakambotaura, ivo vanowanzo Mitengo yakaderera kwazvo izvo zvatisingazive asi ivo vari kutibhadharisa mwedzi wega wega kana gore rinopfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima ako ekubhadhara kubva kune yako iPhone, iPad kana iTunes
Mara Garcia akadaro
Ini ndoda kukanzura kunyorera kwangu kuTunes, izvo zvandisina kuita, vatora foni yangu, ndinoda kukwanisa kuikanzura, handishandisi
Pindura Mara Garcia
Benign Marin Calvo akadaro
Iwe wakanditsanangurira zvakakwana, nekuda kweichi peji ini ndakakwanisa kuzvinyoresa kubva kunyorera. Ndatenda.
Pindura Benigno Marín Calvo